Ahoana ny fomba hametrahana Easy Multi Display - Easy Multi Display
Ahoana no fametrahana mora fampisehoana marika mora
Noforonina On Oktobra 19, 2019
Raha te hahalala ny fomba fametrahana Easy Easy Display araho ireto torolalana ireto hanombohana amin'ny Easy Multi Display ...
Fanamarihana: Mba hametrahana sy hametrahana Easy Easy Show aloha dia mila misintona ny rindrambaiko ianao. Raha mila torolalana momba ny fomba fampidinana ilay rindrambaiko, dia jereo ny lahatsoratra fanohanana mitondra lohateny Ahoana no fomba hisintonana ny EMD amin'ny fanombohana.
Amin'ny Windows, sokafy ny varavarankely File Explorer ary mandehana mankany amin'ny rakitra alaina.
Tsindrio roa eo amin'ny rakitra EMDSetup.exe hanombohana ny fametrahana.
Haneho fiantsoana maika anao ny Windows: Click Eny.
Hiseho ny varavarankely fametrahana. Safidio ny toerana fametrahana anao. Manoro hevitra anao izahay handao ny toerana misy anao. Click Manaraka.
Safidio ny toerana Start Menu Folder ho an'ny programa hametrahana. Manoro hevitra izahay ny handao izany ho toy ny filaharana mahazatra, avy eo tsindrio Manaraka.
Avereno jerena ny toerana fametrahana ary atombohy ny fampirimana Menu, avy eo kitiho Hametraka. Hanomboka amin'ny fametrahana ny Easy Multi Display.
Hiseho ny varavarankely vaovao, mangataka anao hisafidy fiteny hametrahana VLC Media Player. Safidio ny fiteninao ary kitiho OK
Hanomboka ny VLC Media Player Setup. Click Manaraka.
Tsindrio Manaraka hiombon-kevitra amin'ny fifanarahana Fahazoan-dàlana.
Avelao ny fanovana singa solosaina ary tsindrio Manaraka.
Misafidiana toerana fametrahana ho an'ny VLC Media Player, avy eo tsindrio Hametraka.
Andraso ny famenoana fametrahana, avy eo kitiho Farany.
Avereno amin'ny Wizard Easy Multi Setup Wizard ary kitiho Farany.
Ianao izao dia efa nametraka Easy Multi Display!
Inona no safidy hafa rehefa lany ny lisitra dokambarotra niomerika?
Torohevitra 6 momba ny fandefasana indray ny orinasanao aorian'ny areti-mandringana amin'ny fampiasana vahaolana nomerika nomerika.
Mahazo bebe kokoa amin'ny fivarotana